निर्मलाको आत्मालाई शान्ति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
निर्मलाको आत्मालाई शान्ति
आश्विन ३, २०७५ झमक घिमिरे
काठमाडौँ — उफ् ! कति निरीह छ, सरकार ? अपराधीलाई किन उचित छानबिन गरेर कठघरामा उभ्याउन सक्दैन ? किन अपराधीलाई सजाय दिन सक्दैन ? हाम्रो सुरक्षामा खटिने प्रहरी प्रशासनको पनि विश्वास घट्दो छ, जनतामा । कतिपय आपराधिक कर्ममा प्रहरी मुछिने गरेको छ ।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा प्रहरी प्रशासन आफैं विवादमा तानिनुले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमै प्रश्न उठेको छ । सरकारी छानबिन समितिका एक सदस्यले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा माग गर्दै राजीनामा दिए यद्यपि पछि फिर्ता लिए।
अपराधी जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिने काम सरकारको हो, राज्यको हो । सरकार वा राज्य प्रत्येक नागरिकको अभिभावक हो । आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको सवालमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
निर्मला हत्याकाण्डपछि पनि किशोरीहरूको बलात्कार गरेर हत्या गर्ने घटना बढिरहेका छन् । तसर्थ राज्य उनीहरूको जीवनको सवालमा विशेष संवेदनशील बन्नु पर्छ । किशोरावस्थामा उसले उचित मार्गदर्शन पाएन भने जस्तोसुकै कर्म गर्न पनि तयार हुन्छ । अहिले विज्ञान प्रविधिको युग छ, त्यसबाट कोही पनि अछुतो रहन सक्दैन । त्यसैबाट साइबर अपराध मौलाउँदै गएको छ । यसबाट युवा वर्ग आफैं सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीमाथि विशेष निगरानी राख्नुपर्छ ।
नागरिकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । किशोरावस्थामा पुगेका छोराछोरी के गर्दैछन् ? कस्तो संगत गरिरहेका छन् ? उनीहरूको क्रियाकलापमा कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ ? जानकारी राख्नु प्रत्येक अभिभावकको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ । आफ्ना छोराछोरीसँग मित्रवत् व्यवहार गर्दै सही मार्गमा हिँंड्न मद्दत घर–परिवारका सदस्यले गर्नु पर्छ । शारीरिक, मानसिक परिवर्तनका कारण उनीहरू जीवन र जगतका धेरै कुराप्रति जिज्ञासु हुन्छन् । यी जिज्ञासालाई स्वाभाविक रूपमा लिएर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकले मेटाइदिनु आवश्यक छ ।
निर्मलाको हत्याले स्वतन्त्र नागरिकले सडक तताएका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारीप्रति खबरदारी गरेका छन् । अब अरु निर्मलाहरूप्रति कति सचेत छन्, आम नागरिक । गृह प्रशासन यतिन्जेलसम्म के गर्दैछ ? बालिका, महिला दिनानुदिन बलात्कार, हत्या, हिंसामा परिरहेका छन् । यी घटना नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन तत्काल गर्नुको सट्टा उल्टो मूकदर्शक बनेर बसेको भान हुन्छ । सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले किन आफ्नो ज्यानको सुरक्षा माग गरे? उनको भनाइ छ– निर्मलाको आत्माले शान्ति नपाउने अवस्था देखेपछि राजीनामा दिएँ । यसको अर्थ के हो ? निर्मलाको हत्यारा को हो ? स्वयं निर्मलाका बाबु यज्ञराजको भनाइ छ– छोरीको हत्याराको प्रमाण छोपछाप पार्ने र वास्तविक अपराधीलाई सजाय मिल्ने कुरामा आशा मरिसकेको छ । किन आम नागरिकको सरकारी सुरक्षाप्रति यति धेरै निराशा ?
सरकारले उनको जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर उनीमार्फत सत्य कुरा बाहिर ल्याउनु पर्छ । वास्तविक अपराधीको पहिचान गरेर कुकर्मको सजाय दिने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । यो कुराबाट पछि नहटोस्, सरकार । अरु निर्मलाहरूको यस्तो नृशंस हत्या नहोस् ।
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७५ ०८:२१
जबसम्म बलात्कारीलाई कडा सजाय दिन सकिँंदैन, तबसम्म हाम्रा कलिला नानीहरूदेखि आमा, हजुरआमाहरूको अस्मिता संकटमा परिरहन्छ ।
भाद्र २०, २०७५ झमक घिमिरे
काठमाडौँ — आँखा हुन् छोरीहरू तिनै आँखाबाट म संसार नियाल्ने गर्छु दुई बलिया पखेटा हुन् मेरा तिनकै बलमा म जगत्‌काे विचरण गर्छु ।
कवि सुलोचना मानन्धरले भनेझैं छोरीहरू सबैका आँखा भइदिए कति जाती हुन्थ्यो, सबैका पखेटा भइदिए कति वेश हुन्थ्यो ।
तर यहाँ छोरीहरूलाई फुल्नै नपाई बलात्कार गर्ने ब्वाँसाहरूको बिगबिगी छ । छोरीहरू दिनदिनै अकालमै मारिने क्रम बढेको छ । यौनपिपासुले नाबालिकादेखि वृद्धा आमालाई समेत छाडेका छैनन् । स्त्री जातिलाई सधैं भोगको रूपमा परिभाषित गरियो, त्यही रूपमा संस्कारमा बुझियो र बुझाइयो ।
महिला भएर जन्मिनु एक अर्थमा अभिशापजस्तै बनाइयो छ । हाम्रो मानसिकतामा थोरै फेरबदल आए पनि पुरानै सोचविचारले हामी ग्रस्त छौं । छोरा जन्मिए हर्षित हुन्छौं, छोरी जन्मिए बाहिर अनुहारमा नदेखाए पनि भित्र मनको एक कुनामा खल्लोपनको आभास गरिरहेका हुन्छौं । आखिर किन ?
हाम्रो आफ्नै मानसिकतामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । सन्तान जुन लिंग जन्मे पनि प्रसव वेदना उस्तै हुन्छ, समय उत्तिकै लाग्छ, हुर्काइमा उत्तिकै समय खर्चनुपर्छ । अनि किन भेद गरिरहेका छौं, हामी ? सन्तान जन्माउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, उसको हुर्काइ कस्तो वातावरणमा भएको छ, त्यही अनुसार उसको चेतना यावत कुरा विकसित हुँदै जाने हो ।
छोरा र छोरी या अन्य लिंग लिएर जन्मिँदैमा आफैंमा नराम्रो हुँदैन । नराम्रो त अभिभावकत्वको मानसिकतामा छ । केहीलाई छाडेर अधिकांश अभिभावकको मनमा के हुन्छ भने सन्तानभन्दा छोराको चाह बढी हुन्छ, यो मानसिकता हाम्रो समाज, देशमा मात्र होइन, विकसित समाज र देशमा पनि रहेको पाइन्छ ।
किनभने भौतिक रूपमा जतिसुकै विकासको चरम चुली उक्लिए पनि मानिसको सोच र विचारमा अझै भेदमुक्त समाजको परिकल्पना गर्न सकिएको छैन भन्ने कुराको प्रमाण बेलायतको राजपरिवारभित्र छोराले विवाह गरेकी बुहारीले पालना गर्नुपर्ने नियमले स्पष्ट पारेको छ । यहाँसम्म कि बुहारीले आफूले लाउने वस्त्रहरू पनि राजदरबारबाट तोकिएको मात्र लगाउनुपर्ने आफूलाई मनपरेका वस्त्रहरू लाउन नपाउने नियम लादिएको छ । त्यसको ठाउँमा कुनै पुरुष हुन्थ्यो भने उसलाई पनि यस्ता खालका नियमहरू लाइन्थ्यो त ?
विश्व समुदायको मानसिकता हेर्दा पुरुषप्रधान सोचविचारमै चलेको देखिन्छ । यसले पनि के देखाउँछ भने सारा विश्व एक लिंगीय परम्परा, सोच र विचारमै चलेको स्पष्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा स्त्री जातिको समग्र अवस्था मूल्यांकन गर्दा दयनीय नै छ ।
यस्तो अवस्थामाथि छोरीहरू जबर्जस्ती बलात्कृत हुने, अपहरित हुने, उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने र दाग लाग्ने घटना दिनदिनै भइरहेका छन् । यी घटना आम मानिसका लागि सामान्य बन्दै गइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले यस्ता घटनाका दोषीहरूलाई निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गर्छु भने पनि दोषीहरूले आम जनताले चाहेजस्तो खोइ के कारणले सजाय पाइरहेका छैनन् ।
जबसम्म सबै उमेरका स्त्री जातिलाई जबर्जस्ती बलात्कार गर्नेहरूलाई कडा सजाय दिन सकिँंदैन, तबसम्म हाम्रा कलिला नानीहरूदेखि आमा, हजुरआमाहरूको समेत अस्मिता संकटमा परिरहन्छ र यस्ता यौनपिपासुहरूको यौनभोक मेट्ने साधन बनिरहन्छन् । हाम्रा कलिला शिशुहरूदेखि आमा, हजुरआमाहरू यिनको सुरक्षाका लागि सरकारदेखि सडकसम्म आवाज पनि नउठेका होइनन् ।
यी उठेका आवाजको सम्मान गर्न सबै तहतप्काका चेतनशील मानिस एक हुन आवश्यक छ र यस्ता अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न सामाजिक तहबाट पनि पहल गर्नु आवश्यक छ । तब त्यस्ता घटना न्यून हुन्छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:४६